hey okorobịa, On a nkuzi anyị ga-agwa gị na ụzọ ziri ezi iji nweta Spotify Premium ngwa na gị gam akporo n'otu na-arụ. Ọ bụrụ na ị na-egwu music n'anya na ụbọchị gị na-agwụ na music, ị Ọzọkwa lezie music mgbe ọ bụla ị na-arụ ọrụ, mgbe ahụ, a ederede bụ nanị n'ihi na ị na. Music ga-enyere gị ga-esi n'ime melancholy na-eme ka ị na-ọdịnaya.
E nwere ọnụ ọgụgụ nke ngwa ọdịnala na-ekwe ka ị na-na-ntị na music na-akara ma ọ bụ inweta ya domestically na akụrụngwa gị. Dị ka ihe unu maara, Spotify na-sonye na akaụntụ ndị kasị mma music ngwa maka gam akporo, Otú ọ dị ọ bụghị si n'ebe na nza nke mba ebe. Mụta a ederede banyere Spotify adịchaghị ngwa maka gam akporo.
Spotify Premium ngwa bụ ihe na ngwa na-enye gị ntinye digital music na pọdkastị, ebe i nwere ike lezie na inweta ọtụtụ iri nde ndị songs maka free. Nke a ngwa nwere ike ịgbanwe gị kasị mma enyi dị ka ụkpụrụ nke ngwa bụ nke abụọ ọ bụla.
Spotify Premium ngwa
Spotify Premium ngwa nwere ike ibudata maka free. Ya Ọzọkwa na-arụ ọrụ ọ bụla igwe ebe ị nwere ike nweta niile ọkacha mmasị gị songs na lezie ha everytime gị mkpa. On a ngwa, i nwere ike ike gị playlist na i nwere ike ntinye n'oge ọ bụla, ma ọ bụ gị onwe gị kwa nwere ike họrọ ụfọdụ listi ọkpụkpọ na internet. Ị nweta kpọmkwem ntinye nka na ọba iji lezie.
E nwere ọnụ ọgụgụ nke nchịkọta dị ka free, ikpe, adịchaghị na enweghị oke karịa mbipute a ngwa. Nza nke na-ịchọrọ ị lezie songs na-akara na si nbudata ha, e nwere nza nke ngwa ọdịnala n'ihi na ha, Otú ọ dị na ha enweghị ọtụtụ nhọrọ ma ọ bụ nwere ọtụtụ Mgbasaozi, ma ọ bụ na ha agaghị enwe free.
Download Spotify ngwa Free
E nwere ọtụtụ nke ngwa ọdịnala na-ntị ka music, Otú ọ dị onye ọ bụla nke ha ga-emezu gị mgbe a di na nwunye nke nkeji. Na omume na ị na n'ezie music n'anya mgbe ị na-anwa Spotify maka gam akporo n'ihi na ọ na-gosiri four.5 nke 5 n'ime Google Play Ere ahịa site ọtụtụ narị mmadụ.
Plus, a ngwa nwere a doro anya interface na dị iche iche ezi ihe na-eme ka ọ ịdabere maka na a mgbe niile iji. Ndị mmadụ n'otu n'otu na-enweta obi ụtọ site Spotify, dị ka i nwere ike na-eche banyere ụfọdụ downloads na critiques.
The Premium Spotify ngwa bụ a music na video gụgharia ngwa na ụfọdụ ndị ọzọ na nhọrọ, kwekọrọ podcast na enye, na pụtara na ị nwere ike ịmepụta otu-anabata obodo nke music na-enye gị ihe ndị magburu onwe nka.
Ị ga-eji Spotify Premium, na i nwere ike inweta ihe kasị mma music nka, na gị onwe gị kwa pụrụ inweta songs si keagwaraogwa ụdị nchịkọta a ngwa. Họrọ ziri ezi n'aka na-arụ ọrụ maka gị chọrọ na-akpa.
Nanị pịa na na na-enweta button na-amalite na-enweta nanị otu abụọ na mgbe ịmụta melite Usoro nke a na-eji ngwa. Gbaa mbọ hụ na ị na-adịghị ikwu a nzọụkwụ ma ọ bụ mee ka njehie.
Kwalitere ruo ugbu a Feb 20, 2018
installs 200,00efu,00efu +
ugbu Model eight.four.39.673
na-achọ Android four.1 + (SDK 16)
Content ihe Akara gosiri maka 12+
Nhọrọ - Spotify adịchaghị ngwa maka gam akporo
E nwere ọtụtụ nhọrọ nke Spotify Premium. Ị ga-enwe ike igwu egwu ọ bụla na-akụ na-ịchọrọ ị na-egwu na gị cellphone. Ọzọkwa, ma ọ bụrụ na ị na-eme inweta ihe Spotify Premium ngwa, mgbe gị onwe gị kwa pụrụ inweta ihe ọ bụla na-akụ maka free maka free. On a adịchaghị version, i nwere ike inwe free nke mmapụta Mgbasaozi na ụdị nile nke spam Mgbasaozi. Ọzọ nhọrọ na-Ọzọkwa na-ekwu banyere.
Nke a na-eji ngwa bụ kpam kpam mgbasa ozi free ị gained't nweta ọ bụla ụdị pop-acha ọkụ ma ọ bụ malware.
Ị ga-enweta enweghị atụ Skip ọrụ adịru omenala ngwa ị na-enweta ya na si Mgbasaozi.
On a ngwa, ha na-na na weliri drive random mmachi. Nke a na-eji ngwa bụ free iji nweta na i nwere ike enuba enweghị nsọtụ music maka free.
Gị onwe gị kwa pụrụ inweta niile songs gị cellphone maka free na top àgwà na lezie ha everytime na ị chọrọ.
Gị onwe gị kwa nwere ike mmekọrịta gị na songs gị dị iche iche Ngwa ma ọ bụ cellphone, Erere na ọbụna gị laptọọpụ kọmputa. Ị ga-enwe ike lezie a ọnụ ọgụgụ nke redio maka free na si na-akwụ ụgwọ ọ bụla ego.
Olee otú otu onye nwere ike Melite Spotify ngwa na gam akporo
Mepee gị n'otu na-arụ si Settings, na ntọala, ọ dị mkpa ikwe ka eguzobere amaghị isi mmalite. gaa Settings - Safety - akọrọ Unknown Sources.
Mepee ebudatara faịlụ site n'ụzọ nke a file nlekọta ma ọ bụ nanị na-emeghe faịlụ site downloads checklist. Mgbe ahụ, pịa na na Melite na-eche maka ole na ole sekọnd. Na ị ga-ahụ gị set elu bụ uru.
Ugbu a na-emeghe ngwa nke ị nanị tinye na ugbu a wee chọpụta na ọnụ gị Spotify akaụntụ. Na omume ị na-adịghị na otu akaụntụ, ahụ na-aga ka ha ukara website na aha maka akaụntụ
Ugbu a na-emeghe ngwa na-elele na na akaụntụ gị mgbe ọ bụla ị na-nanị banyere na kwadebere. Ugbu a ị chọrọ iji nke a ngwa gị cellphone na ọ dịghị onye mbipụta.
Ọ bụrụ na ị na-ezute na njehie n'ụzọ ziri ezi na-amachi a ngwa, mgbe nanị jikọọ na a US-ekesịpde Okwey. Ị ga-nnọọ na-njehie a na India na ọzọ mba ebe. Ị ga-enwe ike nanị obibi anyị na-arụ ọrụ Spotify Premium ngwa. Eleghị anya ị rụọ ọrụ nke ọma wee banye na, ị pụrụ ịhụ na gị ama niile nke nhọrọ nke Spotify adịchaghị na mkpịsị aka gị. Anyị na-agbalị a atọ, na ya n'ezie na-arụ ọrụ kwesịrị ekwesị maka anyị ebe anyị na-agbalị, na na ọ sina na-arụ ọrụ.
Ịnọgide nkebi ahịrịokwu:
Nke ahụ bụ niile maka na ugbu ụbọchị, ị na-amụ ihe niile banyere Spotify Premium ngwa maka gam akporo. E nwere nza nke ihe mere ọ kasị mma iji nke a ngwa site n'ụzọ nke dị iche iche ngwa ọdịnala. Ị na-zuru ntinye na ọ dịghị onye ụdị spam akwalite na dị iche iche mbipụta. On a mod version of Spotify Premium maka gam akporo, i nwere ike inweta ihe MP3 faịlụ na 320 kbps, nke a na-sonye na akaụntụ kacha mma music. Ị ga-enwe ike ọbụna na-egwu a music na ụda usoro, audio usoro ma ọ bụ ekweisi. Na omume ị na-achọpụta njehie nile ka N'ezie nke, nanị wezuga a jaa. Ìgwè anyị ga-nyere gị aka. Ọzọkwa, ma ọ bụrụ na ị na-eme iji na-achọpụta na ọ na-enye aka, ịkọrọ ya niile gị na di na nwunye na music ndị hụrụ na-enye ha obi ụtọ.
Download ọhụrụ version of Spotify Music .APK file
foduru emelitere: March 12, 2018
Gaa Common Posts :
Carrom 3D FREE ngwa Download
SnapTube ngwa Download
Kụrie See ngwa Download
Gloud Games ngwa Download
Vigo Video – N'oge gara aga, Hypstar 3.8.1 ngwa
Easypaisa ngwa download maka gam akporo – Best Apps maka mobiles
Bobby Movie & Onyonyo maka gam akporo – ngwa Download – Best Apps maka mobiles
Castle Nsogbu ngwa Download – Best Apps maka mobiles
PlayView .APK Download maka gam akporo – Best Apps maka mobiles
Wild West: New Frontier APK Download – Best Apps maka mobiles
UTP – Ultimate Teen Patti ngwa Download – Best Apps maka mobiles
King of Avalon: Dragon Warfare ngwa Download – Best Apps maka mobiles
Weather Live Free Download Download – Free Weather APP maka gam akporo
Galaxy Attack: Ọbịa shooter ngwa Download | Best Apps maka mobiles
Nke a War Of Mine: The Board Game ngwa Download – Best Apps maka mobiles
UkTVNow (Fire TV) .ngwa Download – Best ngwa ọdịnala n'ihi na mobiles
CarX nwayọọ Racing 1.11.1 ngwa + MOD + Data maka gam akporo – Best Apps maka gam akporo
Camera360 Ultimate 7.1.2 ngwa | Download Best égwu N'ihi mobiles
Network Master - Speed ​​Test ngwa Download…
South Park: Ekwentị Mbibi ngwa Download – …
Terrarium TV .APK Download – Best Apps…
Pokemon TCG Online .APK Download – Best…
UKMOVNow .APK Download – Best Apps maka…
CyberGhost Okwey .APK Download – Best Apps…
Eserese na-atọ HD .APK Download – Best Apps…
Stations by Spotify APK 0.0.16 – Free…
Netflix ngwa Download | Best Apps For…
Gboard – na Google Keyboard ngwa Download…
Google VR Services ngwa Download | Best…